ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator
ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator
AOX-QL စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု lတွင်ear လျှပ်စစ် actuaသို့r လျှောက်ထား သို့ fastidious ထိန်းချုပ်မှု auသို့mation အလုပ် တွင် တွင်dustrial ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှင့် ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား protection.AOX ယူ ကြီးမားသော အရေးပါပုံ သို့ ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု lတွင်ear လျှပ်စစ် actuaသို့r ဒီဇိုင်း, နှင့် အဆိုပါ ပုံစံ အသင်းအဖွဲ့ ရှိပါတယ် အားကြီးသော စွမ်းအား ၏ ကုန်ပစ္စည်း ပုံစံ နှင့် တွင်novation. AOX ရှိပါတယ် ပြည့်စုံသော တွင်tellectual အိမ်ခြံမြေ အခွင့်အရေး နှင့် များသော စက်မှုလက်မှု မူပိုင်ခွင့်။ ကျွန်တော်တို့ excpect သို့ ဖြစ် သင့်ရဲ့ ရှည်လျားသော သက်တမ်း မိတ်ဖက် တွင် အဆိုပါ အနား အနာဂတ်။
အင်အားစုအကွာအဝေး: 2000 - 30000 N ကို
အမြန်နှုန်းအလုပ်လုပ်ခြင်း: 0,33 မီလီမီတာ / s ကို - 1 မီလီမီတာ / s နဲ့
ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားအမှတ်အသား: EX ဃ II ကို CT5
ကိုယ်တိုင် operated Handwheel
AOX-QL စီးရီးအဝေးထိန်း၏ shell ကို linear လျှပ်စစ် actuator anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့ 6, IP68 နှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထား optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
AOX-QL စီးရီးအဝေးထိန်း linear လျှပ်စစ် actuator စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအလိုလိုသိနှင့်ပိုမိုအဆင်ပြေထောက်ခံမှုဝင်ရိုးထဲမှာညွှန်ပြချက်, တပ်ဆင်ပြီး။
3. torque ပြောင်းလဲမည်
AOX-QL စီးရီးဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု (AOX-QL-20/30/50/80 မှလွဲ. ) linear လျှပ်စစ် actuator ကိုအလိုအလျောက်အာဏာကိုလုပ်ကြံသောအားဖြင့်ကုိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဆို့ရှင်နှင့်လျှပ်စစ် actuator ရဲ့ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန် Overload ကာကွယ်မှုပေး။
rated လက်ရှိ (က) 50HZ
2 PF3/ 4A
အဆို့ရှင်နှင့်အတူ mounting AOX-QL စီးရီးအဝေးထိန်း linear လျှပ်စစ် actuator သတ္တုအရင်းအမြစ်များ, သင်္ဘော, မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ, စက်ကို လုပ်. , အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကုန်ထုတ်လုပ်မှု, ဘိုင်အိုဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း, အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကဲ့သို့အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများထုတ်ကုန်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု AOX-QL စီးရီးအဝေးထိန်း linear လျှပ်စစ် actuator ၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
မေး: AOX-QL စီးရီးအဝေးထိန်း linear လျှပ်စစ် actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖြေသေချာတာပေါ့ငါသည်သင်တို့ကိုအသင့်ရဲ့အတိအကျလိပ်စာကိုသိစေအခြေအနေပေါ်တွင်လက်ျာလူတစ်ဦးကတင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မြို့မှာရောက်ရှိလာသောအခါအဆိုပါ DHL ပို့ဆောင်သူကို receiver ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: သင် AOX-QL စီးရီးအဝေးထိန်း linear လျှပ်စစ် actuator ဘို့စတော့ရှယ်ယာရှိပါသလား?
hot Tags:: ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု linear လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်